ဖိနပ် - Bezzia | Bezzia
ဖက်ရှင်တွင်နောက်ထပ်သော့ချက်တစ်ခုမှာဖိနပ်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်ကအရေးမပါလျှင်ပြီးပြည့်စုံသောပုံစံသည်မတူပါ ဖိနပ် ဤရွေ့ကား, အရှင်အမျိုးသမီးများ၏အသွင်အပြင်၏မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ Bezzia တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောကရှိမတူညီသောမော်ဒယ်များ၊ စတိုင်များနှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြလိုပြီးကဏ္inမှသတင်းများအားလုံးနှင့်အမီလိုက်နိုင်ရန်။
ဒေါက်ဖိနပ်များ၊ ဖိနပ်များ၊ ဖိနပ် သို့မဟုတ် wellies အားလုံးပင်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များကိုတုံ့ပြန်ပေမယ့်ကောင်းမွန်စွာပေါင်းစပ်စံပြဖြည့်စွက်ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မည်သည့် ၀ တ်ဆင်ရမည့် ၀ တ်စုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များနှင့်စတိုင်များဖြင့်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးမည်။
ကချေသည်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်စုံများကိုဖြည့်စွက်ရန် halftime တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ moccasins ကဲ့သို့၎င်း၊
Loafers၊ ဆောင်း ဦး ရာသီမှာငါတို့ရဲ့ဘုရင်များ
Loafers သည်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်သော်လည်း halftime တွင်ပြီးပြည့်စုံသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖိနပ်များသည်ယေဘူယျအားဖြင့်သားရေဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့3လအတွင်း .
ဆောင်း ဦး နဲ့ဆောင်းရာသီအတွက်ဖိနပ်လမ်းကြောင်းတွေကဒီမှာပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့အတွက်အများကြီးကုန်ကျတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်။
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့5လအတွင်း .
Doly သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်နှင့် ၂၀၁၈ နှစ်ကုန်တွင်မွေးဖွားခဲ့သောတံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Beatriz Furest မှ SS21 ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့6လအတွင်း .
Beatriz Furest ရဲ့အဆိုပြုချက်တွေကိုခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့မဝေငှသေးတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့အံ့အားသင့်ခဲ့ရတယ်။ စတင်သောကုမ္ပဏီတစ်ခု ...
နွေရာသီအတွက် Naguisa ဖိနပ်စုဆောင်းမှုကိုရှာဖွေပါ
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့ 8 လအတွင်း .
Bezzia တွင်စပိန်ကုမ္ပဏီဖြစ်သော Naguisa ၏ဖိနပ်များစုဆောင်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့9လအတွင်း .
Mango သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစုဆောင်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မည်သည့်စုဆောင်းမှုမျှမက၊ ဒါဟာအကြားအပိုင်းပိုင်းအလွန်ကျယ်ပြန့်စုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ် ...
နွေ ဦး ရာသီအတွက် Massimo Dutti ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ကြားနေအရောင်များသည် Mass21 Dutti မှ SSXNUMX အသစ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများစုဆောင်းမှု၏အဓိကဇာတ်ကောင်များဖြစ်သည်။ အဖြူ၊ ကုန်ကြမ်း၊ မုန့်၊ မီးခိုးရောင်နှင့် ...
ခေတ်မှီသောအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးရန်အတွက်ခြေဘဝါးနှင့်ဘွတ်ဖိနပ် ၉ ခု
တနင်္လာနေ့တွင် Bezzia တွင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့်ဖိနပ်များကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထူထဲသောဖိနပ်နှင့်ရော်ဘာချည်မျှင်များပါသောဘွတ်ဖိနပ် ...
ဒေါက်တာ Martens ၏ဖိနပ်အစစ်အမှန်ကိုခွဲခြားသိနိုင်သောလှည့်ကွက်များ